Halkee ayuu marayaa heshiiskii Dortmund iyo Man United ee ku aaddanaa saxiixa Jadon Sancho? – Gool FM
(Dortmund) 09 Agoosto 2020. Kooxda kubadda cagta Dortmund ayaa ku adkaysanaysa waqtigii kama dambeysta ahayd ee ay siisay Manchester United, taasoo doonaysa inay la wareegto Jadon Sancho.
Red Devils ayaa lagu wargeliyey inay sida ugu dhaqsiyaha badan miiska u soo saarto lacagaha ay dalbanayso Dortmund haddii kale ay lumin karaan saxiixa Sancho.
Dortmund ayaa u sheegtay Manchester United inaysan kaga iibin doonin Jadon Sancho wax ka yar 120 milyan oo euro, waxaana lacagtaas laga doonayaa kooxda reer England inay ku bixiso illaa 10-ka bishan Agoosto oo berri ku beegan.
Wargeyska Bild ee ka soo baxa dalka Jarmalka ayaa sheegay in heshiiska uu burburi doono haddii Kooxda Macallin Ole Gunnar Solskjaer aysan lacagta si dhaqso leh u bixin.
Si kastaba ha ahaatee, shalay ayay ahayd markii uu soo baxay warka sheegaya in xiddiga Borussia Dortmund ee Jadon Sancho lagu daray WhatsApp group-ka Kooxda Manchester United, isla markaana uu ku sii dhowanaayo inuu u dhaqaaqo garoonka Old Trafford.